Otu ihe ndozi nduku ga-emeghe na mpaghara Tula - magazin "Potato System"
Na Disemba 29, Gọvanọ nke mpaghara Tula Alexei Dyumin na onye isi nchịkwa McCain Foods Rus LLC Alexander Petrov bịanyere aka na nkwekọrịta maka iwu ebe a na-arụpụta nduku na Uzlovaya SEZ.
«McCain Foods Limited ”bụ onye ndu mba ụwa n’etiti ndị na-emepụta nri oyi. Companylọ ọrụ ahụ na-emepụta otu ụzọ n'ụzọ atọ nke French fries n'ụwa. Nhazi ihe dị na Uzlovaya ga-abụ saịtị izizi nke Russia. A na-eme atụmatụ itinye ego ihe ruru ijeri rubles 12,7 na ọrụ ahụ.
“Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ nye mpaghara Tula na ụlọ ọrụ ahọpụtarala mpaghara anyị maka itinye n'ọrụ ntinye ego ya. Ọ ga-emepụta ihe karịrị ọrụ 160 ma kwado ntoputa nke lọjistik ọhụrụ na ebe nchekwa. Alexey Dyumin kwuru na oge ya na onye na-etinye ego na-arụkọ ọrụ kwuru, ọ ga - enye ohere ọ bụghị naanị igbo mkpa ụlọ, dochie ihe mbubata, mana n'ọdịnihu ọ ga-arụ ọrụ maka mbupụ.
Alexander Petrov kelere Gọvanọ maka nkwado ya wee kwupụta olileanya maka ogologo na-arụkọ ọrụ ọnụ.
isi: Ọchịchị nke mpaghara Tula
Tags: McCainFrench fires emepụtaraMpaghara Tula
"August-Agro" ga-ewu ụlọ elu dị elu nke nwere ike ịnwe ọka dị puku 140 puku n'akụkụ Kazan
Mwube nke otu ụlọ nri na-ekwenye ekwenye na mpaghara Lipetsk
Ndị na-ere ahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa: Findchọta nkwekọrịta